စက်ပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတရုတ်ငုံ့အပြည့်အဝ Hydraulic4Roll ပြား - အရည်အသွေးမြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း - Parfit
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပန်းကန် Bende စက် >4Roll ပြား Bende စက် > အပြည့်အဝ Hydraulic4Roll ပြား Bende စက်
အောက်ပါ related စက်ငုံ့အပြည့်အဝ Hydraulic4Roll ပြားအကြောင်း, သင်တို့ကိုငါပိုကောင်းတဲ့အပြည့်အဝ Hydraulic4Roll ပြား Bende စက်နားလည်ကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
4 roller လှည့်ပေးသောစက်နှင့်အပြောင်းအရွေ့ဟိုက်ဒရောလစ်ကထိန်းချုပ်ထားကြသည်အပြည့်အဝဟိုက်ဒရောလစ်4လိပ်ပြားကွေးစက်, စက်ကွေးဒီလိုမျိုးအဓိကအားဖြင့်ကြီးမားသော workpiece အသုံးပြုသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြည့်အဝဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်၏အင်္ဂါရပ်များ:
1. အပြည့်အဝဟိုက်ဒရောလစ်လှုပ်ရှားမှု (ပုံမှန်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်စက်မှုအမျိုးအစားနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသော)
(တဦးတည်းလျှပ်စစ်မော်တာ, လျှော့ချခြင်းနှင့်ဂီယာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသော) 2. လွတ်လပ်သောဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ
3. အနိမ့်-အကျိုးရှိစွာ clutch နှင့်အတူအလိုအလျောက်ဟိုက်ဒရောလစ် linear speed ကိုcompensationï¼different)
4. controlï¼မပါဘဲ clamping နှင့်အတူဖိအားcontrolï¼different Clamping ‰
1. အလုပ်အဖွဲ့ roller: ကိုနှင်ထုတ်သံမဏိ ingot (ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ): €âကြမ်းတမ်း (စက်မှုစမ်းသပ်မှု) -heat ကုသမှု (hardening နှင့်သမ) "€â annealing-UT အားနည်းချက်အတုလုပ်တဲ့" စွမ်းဆောင်ရည်-အတုလုပ်တဲ့ roughcast â€စစ်ဆေး€ "UT အပြစ်အနာအဆာ MT "€âပြီး" €âတစ်ပိုင်းပြီး "။
2. အကြီးစား Forge: ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်, ဂီယာ, roughcast âအတုလုပ်တဲ့ဂီယာဝင်ရိုး€ "မျက်နှာပြင်âစစ်ဆေးရေး€" ကြမ်းတမ်း€ "A UT အားနည်းချက်€" "MT âပြီးသွား€" semiâ€ပြီး "€â UT အားနည်းချက် detector အပူကုသမှု။
3. ဂဟေဆော်ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ: ထိန်သိမ်း, ကိုယ်ထည်, ဘီးသေတ္တာ
4. âစာရွက်သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်း-ဂဟေ-ချုပ်ရိုး UT သို့မဟုတ် RT ကိုအပြစ်အနာအဆာတို့အတွက်€ "€â pretreatment" စက်ရုံထဲမှာပြား (ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများစမ်းသပ်မှု) € "A annealing ကုသမှု€" ကြမ်းတမ်း-finishingâ€ "တုန်ခါမှုစိတ်ဖိစီးမှုreliefâ€ "ပူပြင်းတဲ့ပေါက်ကွဲမှု€" ပြီး
1. ကလည်ပတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ဖြစ်သောကြောင့်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သူဖောက်သည်
အတှေ့အကွုံ 2. ကင်းမဲ့ခြင်း
မြင့်မားသောတိကျဘို့ရှာ 3. , အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
4. အမြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား, အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်
5. မျှော်လင့်တစ်ဦးတည်းသာအော်ပရေတာ, အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ
ကြောင့်သတ္တုစာရွက်၏ 6. ကြီးမားလွန်းမြင့်မားထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးများအတွက်စက်ကိရိယာများကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်သည့်
7. မျှော်လင့် CNC operate
စက်စံ configuration များ:
1. ကိုနှစ်ချက် (အစားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုညွှန်ပြချက်၏) ဒစ်ဂျစ်တယ်အီလက်ထရောနစ်စာဖတ်ခြင်း device ကို LED
2. နှစ်ဦးနှစ်ဦးကိုလွတ်လပ်သောဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာများကမောင်းထုတ် device ကို roller clamping
4. တပ်ဦး console ကို (အသင့်တော်ဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ် device အတွက်) တပြင်လုံးကိုစက်ကိုထိန်းချုပ်
5. Hydraulic ထမ်းဘိုးကိုထမ်း (ထိုပိတ်ထားသောတန်ဆာစည် Remove)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းကန်ကွေးစက်အပေါငျးတို့သလိပ်လျှပ်စစ်, စက်မှုဟိုက်ဒရောလစ်သို့မဟုတ် CNC ခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်သည်ဖြစ်စေ, အမှန်တကယ်လိုအပ်™customersâ€အဆိုအရဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်
hot Tags:: အပြည့်အဝကတရုတ်လုပ် Hydraulic4Roll ပြားငုံ့စက်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်ဝယ်, စျေးပေါ, လျှော့စျေးနိမ့်သောစျေးနှုန်း, လျှော့စျေးဝယ်အရည်အသွေးမြင့်မား, စတော့ရှယ်ယာထဲမှာအစုလိုက်အခမဲ့နမူနာ, စျေးနှုန်း, စျေး စာရင်းကိုးကား, အမှတ်တံဆိပ်, နောက်ဆုံးပေါ်, classy, ​​အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း
CNC4လိပ်ပန်းကန်ကိုလှိမ့စက်နှစ်ဆဖြစ်တော့နှင့်အတူစက်ကွေး4လိပ်သံမဏိစက်ကွေး4လိပ်ပန်းကန်
စက်ငုံ့ arc Down လေးကြိတ်စက်ပြား
အရန်စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ CNC4ကြိတ်စက် Rolling စက်
စာရွက်သတ္တု Cone Rolling စက်
နှစ်ချက် pinch နှင့်အတူ4Roll သံမဏိ Bende စက်